ब्यापारी–कर्मचारी कनेक्सनमा दैनिक करोडौं भन्सार छली « Naya Page
ब्यापारी–कर्मचारी कनेक्सनमा दैनिक करोडौं भन्सार छली
नेपालमा आयात हुने सबै सामान बच्चाका मात्रै ?
प्रकाशित मिति : 13 March, 2018 6:32 pm
काठमाडौं, २९ फागुनः अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पदबहाली गरेको चौथो दिन फागुन १७ मा अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएलगत्तै एकै दिन ३५ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व असुली भएको तथ्यांक सार्वजनिक भयो । भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र ब्यापारीको मिलेमतोमा न्यून बिजकीकरण गरी दैनिक ३५ करोड राजस्व भ्रष्टाचार हुने गरेको कुरा यो तथ्यले नै खुलिसकेको छ । सबैभन्दा बढी भन्सारछली बिराटनगर भन्सार कार्यालयबाट हुने गरेको छ ।
भन्सार प्रमुख मिमांस अधिकारी र राजस्वका निर्देशक दिब्यराज पोखरेल ।
बिराटनगर भन्सारबाट भित्रिने सामानमा २५ प्रतिशतमात्र शुल्क तिरी ७५ प्रतिशत भन्सार छली हुने गरेको छ । स्रोतका अनुसार बिराटनगर भन्सारबाट एउटा कन्टेनरमा ब्यापारीले ६५ हजारदेखि ८५ हजार डलर बराबरको सामान ल्याएका हुन्छन् । तर ८ हजारदेखि बढीमा १५ हजार रुपैयाँको मात्र भन्सार तिरी भित्र्याउने गरेका छन् । बढीमा १५ हजारको भन्सार तिरेर ६५ हजार डलरको सामान विनाभन्सार आयात गरी देशलाई करोडौं रुपैयाँ राजस्व मार्ने काम ब्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा बिराटनगर भन्सारमा भइरहेको भइरहेको छ । जाँचपास गर्दा सन्दर्भ मूल्यको २५ प्रतिशत मात्र मूल्यांकन कायम गरी प्रतिकन्टेनर ३ लाख रुपैयाँसम्म घुस लिने गरेको आरोप बिराटनगर भन्सारका प्रमुख मिमांस अधिकारी र भन्सार अधिकृत सुशील थापामाथि छ ।
बिराटनगर भन्सारमा ब्यापारीले ठूला मानिसले लगाउने पाइन्ट ल्याएको छ भने प्रज्ञापनत्रमा इलाष्टिक पाइन्ट र कट्टु लेखी भन्सार छली गर्दैआएका छन् । प्रायः सबै सामान बेबी भनेर भित्रने गरेका छन् । टिसर्टहरु पनि ठूला मानिसले लगाउनेलाई बेबी भनेर ल्याउने गरेका छन् । ठूला मानिसले लगाउने पाइन्टको प्रतिपीस ३ डलर भन्सार तिर्नुपर्छ । तर इलाष्टिक पाइन्टको ४५ सेन्ट भन्सार तिरे हुन्छ । कट्टुको त १७ सेन्टमात्र तिरे हुन्छ । यसरी एउटा पाइन्ट बराबर २.८३ डलर भन्सार छली बिराटनगरबाट हुँदैआएको छ । ठूला मानिसको मोजा ल्याए पनि बेबी मोजा उल्लेख गरी भन्सारछली हुन्छ । बेबी मोजाको ४ सेन्टमात्र भन्सार लाग्छ भने ठूला मोजाको ३० सेन्ट भन्सार शुल्क लाग्छ ।
ठूला मानिसले लगाउने स्पोर्ट जुत्ताको प्रतिजोर ४ डलर तिर्नुपर्छ तर बेबी भनेर १.५० डलरमात्र तिर्छन् । बिराटनगर भन्सारबाट यसरी दैनिक भन्सारछली हुने गरेका यी केही दृष्टान्त मात्र हुन् । यसरी दैनिक करिब करोडौं रुपैयाँ हाराहारीमा बिराटनगरबाट भन्सारछली हुँदै सामान आयात भइरहेको छ ।
सर्ट पाइन्टदेखि रेडिमेड कपडा सबैमा यसरी भन्सार छली हुने गरेको छ । अर्थमन्त्रालय, भन्सार विभाग, अख्तियारजस्ता निकायले बिराटनगर भन्सारबाट भित्रने एउटामात्र ट्रकको खानतलासी लिने हो भने प्रज्ञापनपत्रमा एउटा र सामान अर्कै भएको फेलापर्ने स्रोतले बताएको छ ।
यसरी दिनमा सयौं ट्रक रेडिमेड कपडा चीनबाट बिराटनगर हुँदै भित्रने क्रममा करोडौं रुपैयाँ भन्सारछली हुँदैआएको छ । न्यून बिजकीकरण गरी भन्सारछली गरेबापतको रकमको ६० प्रतिशत ब्यापारी र ४० प्रतिशत भन्सारका प्रमुख मिमांस अधिकारीले लिने गरेका छन् । भन्सार प्रमुख अधिकारीले नै राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सारका महानिर्देशकदेखि इटहरी र पथलैया राजस्व मिलाउने गरेका छन् ।
इटहरी राजस्वका प्रमुख जयबहादुर भण्डारी र पथलैया राजस्वका दिब्यराज पोखरेलसमेतलाई सेटिङ गरिएका कारण राजस्वले कुनै ब्यापारीका सामान पनि चेकजाँच नगरी निर्वाध भित्रन दिने गरेको छ । भन्सार विभागका महानिर्देशक जगदीश रेग्मी र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भूपाल बराललाई समेत मिलाएर बिराटनगर भन्सारबाट तस्करी हुने गरेको छ । जुन कुरा अर्थमन्त्रालयले छानबिन गरे स्पष्ट हुने स्रोत बताउँछ । भन्सार प्रमुख अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख दीप बस्न्यातका पीए लक्ष्मण बाँस्तोलालाई समेत मिलाएर निर्वाध तस्करी गर्दैआएका थिए ।
काठमाडौं, २ पुस । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको विधान मस्यौदालाई पारित गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको
ओली-प्रचण्डको प्रतिवेदनमा सरकारको तीब्र प्रशंसा, फरक समूहमाथि हमला
काठमाडौँ, २९ मंसिर: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बहु चर्चित स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय
के छ वामदेव गौतमको बहुचर्चित छुट्टै प्रतिवेदनमा (पूर्ण पाठ)
काठमाडौं, २९ मंसिर : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बहुचर्चित स्थायी कमिटी बैठकमा शनिबारबाट सुरु